အင်္ဂါ, ၂၁ မေ ၂၀၁၃	Mizzima Burmese
Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > ကြေညာချက် > လူလိမ်လူကောက် စစ်စုံထောက်
ဖေဖော်ဝါရီလ ၃ ရက်၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်။
`လူလိမ်လူကောက် စစ်စုံထောက်´ Rogue Agent အမည်ရှိ စာအုပ်ကို မဇ္ဈိမသတင်းဌာနက ပင်းဂွင်းအိန္ဒိယ စာအုပ်တိုက်နှင့် ပူးတွဲ၍ ထုတ်ဝေလိုက်ပြီဖြစ်သည်။နန်ဒီတာဟက်ဆာ Nandita Haksar က ဤစာအုပ်သည် ၁၉၉၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလကတည်းက အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ အကျဉ်းထောင်များတွင် အကျဉ်းချခံနေကြရသော တိုက်ပွဲဝင် ရခိုင်နှင့် ကရင်လူမျိုး ၃၄ ဦးအကြောင်း စုံစမ်းလေ့လာရေးသားထားသည်။ ၎င်းတို့ကို အိန္ဒိယထောက်လှမ်းရေး အရာရှိတဦးက မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ ခိုင်းစေချက်ဖြင့် လှည့်ဖြားဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
MEDIA ADVISORY02 February 2011
Mizzima Media releases Burmese-language edition of Rogue AgentDelhi, India (Mizzima) - A Burmese-language edition of Rogue Agent by Nandita Haksar has just been released by Mizzima Media in cooperation with Penguin India.The book is an investigative exploration of the plight of 34 Arakanese and Karen freedom fighters who have languished in Indian jails since February 1998, when they were deceived by an Indian intelligence officer allegedly acting at the behest of Burma’s military government.
We have 68 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved